Pregnancy ibu ibu mgbako-enye
Pregnancy ibu ibu mgbako
Pregnancy ibu ibu mgbako-enye gị ohere gbakọọ ezigbo ibu ibu mgbe ọ bụla izu mgbe ha dị ime, dabere na nwaanyị arọ tupu afọ ime, ịdị elu na ime izu. Ọzọkwa, ọ na-egosi gị ezigbo afọ ime ibu ibu chaatị kwa izu.
Tinye parameters gbakọọ nkịtị ibu ibu mgbe ha dị ime
Gị ibu tupu afọ ime: kg pound
Gị ugbu a na ibu ibu: kg pound
cm ụkwụ/Sentimita asatọ
1 izu 2 izu 3 izu 4 izu 5 izu 6 izu 7 izu 8 izu 9 izu 10 izu 11 izu 12 izu 13 izu 14 izu 15 izu 16 izu 17 izu 18 izu 19 izu 20 izu 21 izu 22 izu 23 izu 24 izu 25 izu 26 izu 27 izu 28 izu 29 izu 30 izu 31 izu 32 izu 33 izu 34 izu 35 izu 36 izu 37 izu 38 izu 39 izu 40 izu
Ịkpata: kg pound
Ibu ibu dị iche iche n'ihi na nwaanyị ọ bụla na onye ọ bụla dị ime. Ibu ibu mgbe ha dị ime ekewet ọtụtụ components, dị ka ịdị arọ nwatakịrị nke banyere 6.5-13 pound, akpanwa na mmiri ọmụmụ itu ruo 5 pound, welitekwuo olu na ọbara - banyere 3.5-4 pound, ara ịmụba ọnụ ọgụgụ - 1 paụnd, na-abawanye nke ozu abụba na 6.5-13 pound. –
N'ihi na ụbọchị mgbako
Gbakọọ atụmatụ ruru ụbọchị nke nwa gị, tụụrụ ime ụbọchị na ugbu a afọ ime okwu.
Kacha emepụta ihe oriri ụbọchị mgbako
Gbakọọ gị kacha emepụta ihe oriri ụbọchị, ma ọ bụrụ na ị chọrọ dịkwuo gị Ohere nke na-atụrụ ime.
Ovulation kalenda mgbako
Gbakọọ gị kacha emepụta ihe oriri ụbọchị na na na ovulation kalenda ole na ole sochirinụ ọnwa.
Pregnancy ibu ibu kwa izu mgbako
Gbakọọ ezigbo afọ ime ibu ibu kwa izu.